Hlola i-Italy - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu e-Italy
Okufanele ukwenze e-Italy
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yase-Italy
Bukela ividiyo ekhuluma nge-Italy
Hlola i-Italy izwe eliseNingizimu yeYurophu. Ngokubambisana Greece, zamukelwa njengendawo yokuzalwa yesiko laseNtshonalanga. Akumangazi ukuthi futhi lisekhaya inani elikhulu kunazo zonke lama-UNESCO World Heritage Sites emhlabeni. Ubuciko obuphezulu nezikhumbuzo eziyisithupha zitholakala yonke indawo ezweni lonke. Hlola i-Italy ukuthola okuningi.
Idume umhlaba wonke ngokudla okumnandi kwayo, imboni yayo yemfashini, izimoto zemidlalo kanokusho kanye nezithuthuthu, amasiko ahlukahlukene wesifunda nezilimi, kanye nogu lwayo oluhle, amachibi olwandle kanye nezindawo zezintaba (i-Alps ne-Apennines). Shono uvame ukubizwa ngokuthi iBel Paese (Izwe Elihle).
Amazwe amabili azimele azungezwe i-Italy ngokuphelele: I-San Marino ne Vatican Idolobha. Yize ubuchwepheshe bungeyona ingxenye ye-European Union, zombili lezi zifundazwe nazo ziyingxenye yeSchengen Area kanye ne-European Monetary Union (EMU). Ngaphandle komfaniswano ohlukene wamaphoyisa, akukho okuguqukayo okusobala okuvela kulezi zindawo nensimu yase-Italy, futhi imali iyafana. IsiNtaliyane siwulimi olusemthethweni kuwo womabili la mazwe.
Ngokuqinisekile, abantu babehlala peninsula yase-Italy okungenani iminyaka eyi-200,000; Impucuko yamaNeolithic ichuma e-Italy yangaphambi kokusungulwa kepha yaphangwa, noma yathenjwa, ngase-2000 BC yiqembu lezizwe zase-Indo-European, ezaziwa njengezizwe zama-Italic. Lezi zazihlobene kakhulu noma zingahlobene eduze futhi zazinezizwe ezinjengeLatins, ama-Etruscans, ama-Umbrian, amaSamnites, amaSiseri, amaLigure, ama-Oscans, ukubala nje abambalwa. Impucuko yase-Etruscan yayiphakathi kokukhuphuka ngekhulu le-6th BC futhi yaqhubeka yaze yafika isikhathi seRepublican; ichuma kulokho manje okuyiNyakatho yeLazio, Umbria neTuscany. Ngekhulu le-8th ne-7th BC, amakoloni amaGrikhi asungulwa phakathi eSicily nengxenye eseningizimu ye-Italiya: isiko le-Etruscan lakhula ngokushesha lelo yiGreece. Lokhu kuboniswe kahle eminyuziyamu ethile emihle kakhulu yase-Etruscan; Izindawo zokungcwaba zase-Etruscan nazo zikufanele ukuvakashelwa. Rome uqobo lwayo lwaluphethwe amakhosi e-Etruscan kuze kube u-509 BC, lapho owokugcina wawo - uTarquinius Superbus - ekhishwa emandleni futhi kwasungulwa iRiphabhulikhi yaseRoma. Ngemuva kwezimpi ezilandelanayo, amaRoma aphanga idolobha lase-Etruscan eliseduzane laseViii e396 BC; lokhu kubangele ukuwa komhlangano we-Etruscan futhi abantu bakwa-Etruscan uqobo baqala ukuthotshiswa umfutho.
IRoma lasendulo ekuqaleni laliyidolobhana elincane elasungulwa emhlabeni ngekhulu le-8th BC. Ngokuhamba kwesikhathi, umbuso wayo wokuqala wakhula waba yiriphabhulikhi - eyayizogcina isiphenduka umbuso - owamboza iMedithera yonke futhi unwebeka uze ufike enyakatho Scotland nasempumalanga kude neMesopotamia ne-Arabia.
Isimo sezulu sase-Italy sihluke kakhulu, futhi singaba kude nesimo sezulu saseMedithera esingejwayelekile. Iningi lase-Italy linamahlobo ehlobo ashisayo, awomile, kuthi ngoJulayi kube inyanga eshisa kakhulu onyakeni. Ama-Autumn ngokuvamile anemvula. Ubusika buyabanda futhi bunomswakama (ngenxa yalokho buba nenkungu) eNyakatho, futhi buthambile eningizimu. Izimo ezisezindaweni ezingasogwini ezingasogwini zingahluka kakhulu kunendawo ephakathi nendawo nezigodi, ikakhulukazi phakathi nezinyanga zobusika lapho izindawo eziphakeme zivame ukubanda, zimanzi, futhi zivame kuneqhwa. Izintaba ze-Alps zinesimo sezulu sasezintabeni, esinehlobo lasehlobo elipholile nobusika obubanda kakhulu.
I-Northwest Italy (i-Piedmont, iLiguria, iLombardy ne-Aosta Valley)
Ikhaya le-Riviera yase-Italy, kufaka phakathi iPortofino neCinque Terre. Ama-Alps, amadolobha asezingeni eliphakeme enhlokodolobha yezimboni ye-Italy (iTurin), itheku elikhulu kunayo yonke (iGenoa), indawo enkulu yezamabhizinisi yezwe (iMilan), abelana ngezivakashi zasendaweni ngezindawo ezinhle njengeLake Como neLake Maggiore indawo, kanye nemicebo emincane eyaziwayo yeRenaissance efana neMantova.
I-Northeast Italy (i-Emilia-Romagna, i-Friuli-Venezia Giulia, iTrentino-Alto Adige neVeneto)
Kusuka emiseleni ye Venice kuya enhlokodolobha ebusayo yeBologna, kusuka ezintabeni ezihlaba umxhwele ezinjengeDolomites nezindawo zokuphumula ski ezinjengeCortina d'Ampezzo kuya emafulethini amnandi weParma neVerona lezi zifunda zinikeza okuningi ongabona futhi ukwenze. ISouth Tyrol nedolobha lasePlanteste elinendawo yonke inikela ngendondo eyingqayizivele eseCentral European.
I-Central Italy (i-Lazio, iMarche, iTuscany, i-Abruzzo ne-Umbria)
Uphefumula umlando nobuciko. I-Roma inezimangaliso ezisele zoMbuso WaseRoma kanye nezinye zezimpawu ezaziwa kakhulu emhlabeni, ezihlanganiswe nomuzwa omnandi wedolobha elikhulu. UFlorence, ongowokuzalwa kweRenaissance, uyisithandwa esiphezulu sikaTuscany, kanti izindawo ezisemaphandleni ezinhle kakhulu namadolobha aseduze anjengeSiena, I-Pisa futhi uLucca unokuningi angakunikeza labo abafuna umlando ocebile walelizwe namagugu. I-Umbria inamadolobha amaningi amahle njengePerugia, i-Orvieto, iGubbio ne-Assisi
I-Southern Italy (i-Apulia, iBasilicata, iCalabria, iCampania neMolise)
Ukuphithizela Naples, amanxiwa amadlingozi we yasePompeii, i-Amalfi Coast yothando neCapri ebeka phansi imigwaqo engemuva kwezikebhe zaseCalabria, kanye ne-agritourism ekhuphukayo isiza ukwenza indawo yase-Italiya engavakashelwa njengendawo enhle ongayihlola.
Isiqhingi esihle esidume ngobuciko bemivubukulo yasendulo, ulwandlekazi nokunye kokudla okuhle ekhishini lase-Italy okufanele sikunikeze.
Isiqhingi esikhulu amanye amakhilomitha angama-250 ngasentshonalanga kogu lwase-Italy. Ubuhle obuhle, izikhumbuzo ze-megalithic, ulwandle oluhle namabhishi: indawo enkulu yamaholide yokuvakasha kwabavakashi.
Rome (Roma) - inhlokodolobha, i-Italy kanye, phambilini, yoMbuso WaseRoma kuze kube se285 AD
IBologna - enye yamadolobha amakhulu asenyuvesi emhlabeni agcwele umlando, amasiko, ubuchwepheshe nokudla
UFlorence (Firenze) - idolobha laseRenaissance elaziwa ngobuciko bokwakhiwa kwalo nobuciko obe nomthelela omkhulu emhlabeni wonke
Genoa (IGenova) - iRiphabhulikhi yasendulo yempi yasikhathi esedlule; imbobo yayo iletha ezokuvakasha kanye nezohwebo, kanye nezobuciko nezakhiwo
ikhayithi (Milano) - enye yamadolobha emfashini omhlaba, kodwa futhi nesikhungo esibaluleke kakhulu sokuhweba namabhizinisi e-Italy
Naples (Napoli) - elinye lamadolobha amadala kunawo wonke emhlabeni waseNtshonalanga, elinesikhungo somlando somlando okuyi-UNESCO World Heritage Site. Lokhu futhi kuyindawo yokuzalwa ye-pizza.
I-Pisa - Enye yamariphabhulikhi asendulo asolwandle, kuyikhaya lesithombe esingazwakali se-Leaning tower of Pisa
ITurin (Torino) - idolobha lezimboni elaziwayo nomlando, inhloko-dolobha yokuqala yase-Italy kanye nekhaya leFIAT. Idolobha libuye laziwa ngesakhiwo salo esikhulu.
Venice (IVenezia) - elinye lamadolobha amahle kakhulu e-Italy, eyaziwa ngomlando wayo, ubuciko bawo, futhi nemisele yayo edumile yomhlaba
I-Praia ibhishi elihle kakhulu likaMare, libhekene nesiqhingi saseDino
I-Isola Bella, iziqhingi zaseBorromean, iLake Maggiore (Italy)
I-Italian Alps - ezinye zezintaba ezinhle kakhulu eYurophu, kufaka phakathi iMont Blanc ne Mount Rosa
I-Amalfi Coast - Amatshe asogwini oluhle ngendlela emangalisayo, athandwa kangangokuba izimoto ezizimele zivinjelwe ezinyangeni zasehlobo
ICapri - isiqhingi esidumile eBay of Naples, ngaphambili eyayiyindawo yokuthandwa yababusi baseRoma
ICinque Terre - amadolobha amahlanu amancanyana, acwebile, amadolobha agudle ugu olude olugudle ulayini weLiguria
I-Lake Como - umkhathi waso ubelokhu ubongwa ngobuhle bawo kanye nobunye kusukela ezikhathini zamaRoma
ILake Garda - ichibi elihle eNyakatho ye-Italy lizungezwe nemizana emincane
IMatera - esifundeni saseBasilicata, iMatera inamagama athi "sassi", izindawo ezilondolozwe kahle zamatshe eziyindawo yamaGugu omhlaba futhi enye yezindawo eziningi ezibalulekile eSouthern Italy
yasePompeii kanye neHerculaneum - amadolobha amabili angomakhelwane ambozwe ukuqhuma kweMt. IVesuvius ku-AD 79, manje eye yambulwa ukuze iveze impilo njengoba yayinjalo ngezikhathi zamaRoma
IVesuvius - intaba-mlilo edumile eshisayo enombono omangalisayo weBay of Naples
I-Italy inendiza yezindiza kazwelonke, i-Alitalia eseRome kanye nomncintiswano omusha eMilan obizwa nge-Air Italy.
I-Italy ingesinye sezizathu eziyimpi enkulu yempi yezindiza eziphansi zaseYurophu izindlela eziningana eziya / ezivela ngaphakathi kwe-Italiya zinikezwa. Izikhumulo zezindiza ezinkulu, yiqiniso, zisetshenziswa izindiza ezinkulu zaseYurophu.
Izindiza ezihambahamba ngaphakathi zivame ukufika eRoma naseMilan, kanti iRome iyisango eliphambili lamazwe liphela ezweni.
ENyakatho nePhakathi ye-Italy kunesistimu eyenziwe kahle yezimoto (i-autostrade), kanti eningizimu kuba kubi kakhulu ngekhwalithi nangezinga. Yonke imigwaqo ekhonjwe yi-A ilandelwa yinombolo emuva oluhlaza emuva. Imigwaqo eminingi iyimigwaqo ekhokhwayo. Abanye baneziteshi zokukhokha ezikuvumela ukufinyelela esigabeni sonke (ikakhulukazi i-tangenziali yaseNaples, Rome, neMilan, ngokwesibonelo), kepha ngokuvamile, iningi lineziteshi zokuphuma nezokuphuma; kulezo zimigwaqo, udinga ukuqoqa ithikithi lapho ungena futhi inani lakho lokukhokha lizobalwa lapho uphuma ngokuya ngebanga elimboziwe.
Akumangazi ukuthi i-Italian yilimi olukhulunywa lwendabuko ngabaningi abangamaNtaliyane.
IsiNgisi sikhulunywa kabanzi ngamazinga ahlukahlukene wobuchule ezindaweni ezihanjwa kahle lapho zingasetshenziswa ngabathengi bezitolo nabasebenza izivakashi. Ngaphandle kwalokhu, uzothola ukuthi iningi lamaNtaliyane aliguquki ngesiNgisi, isifundo esisha esenziwe ezikoleni (okokuqala sethulwa kuma-1970 esikhundleni sesiFulentshi).
Kuningi esingakubona e-Italy kangangokuba kunzima ukwazi ukuthi uzoqala kuphi. Cishe yonke idolobhana elincane inendawo ethokozisayo noma ezimbili, kanye nezinye izinto ezimbalwa ezizobonwa.
I-Italy ine-euro (€) njengemali yayo yodwa.
Uma uhlela ukuhamba emaphandleni noma ezindaweni zasemakhaya kungenzeka ukuthi awethembeli kumakhadi wakho wesikweletu, njengoba emadolobheni amaningi amukelwa ngenani elincane lezitolo nezindawo zokudlela. Yini ongayithenga e-Italy.
I-Risotto - ilayisi le-Arborio elihlanjululwe lapheka epanini elingashisi ngesitoko. Umphumela uba isidlo esinokhilimu omnandi kakhulu futhi esinhliziyo enhle. Inyama, inkukhu, ukudla kwasolwandle, imifino kanye noshizi cishe njalo kuyangezelelwa ngokuya ngeresiphi nendawo. Izindawo eziningi zokudlela, imindeni, amadolobhana kanye nezifunda zizoba ne-risotto yesiginesha noma isitayela okungenani se-risotto, ngaphezulu noma endaweni yesitsha se-pasita esayiniwayo (risotto alla Milanese is a classic Italian). IRisotto isidlo esijwayelekile eLombardy nasePiedmont.
I-Arancino - Ibhola ejulile ethosiwe yelayisi nge-tomato sauce, amaqanda noshizi. Kuyindlela esezingeni eliseningizimu yeNtaliyane, kepha manje isivame kakhulu kulo lonke. Akumele kudidaniswe ne-supplì, okuyindlela ekhethekile yamaRoma futhi engazwakali kuyo yonke iphenathi.
I-Polenta - Ukudla kommbila okuphuzi (ama-grits aphuzi) okuphekwe ngesitoko. Ngokuvamile kukhonzwa kube okunokhilimu noma kuvunyelwe ukusetha bese kusikwa kube yimilo bese kuthosiwe noma kugazingiwe. Kuyisitsha esivame kakhulu ezindaweni zokudlela zasentabeni, ezivame ukudliwa nenyamazane noma inyama ebomvu.
IGelato yigama lesiNtaliyane elisho u-ayisikhilimu. Izinongo ezingezona izithelo zivame ukwenziwa kuphela ngobisi. IGelato eyenziwe ngamanzi futhi ngaphandle kwezithako zobisi yaziwa nangokuthi i- sorbetto. Kusha njenge-sorbet, kepha i-tastier. Kunokunambitheka okuningi, kufaka phakathi ikhofi, ushokoledi, izithelo, ne-tiramisù. Lapho uthenga endaweni yokudlala ijeli, unenketho yokuzikhipha esikhondweni esifile noma kubhavu; enyakatho ne-Italy uzokhokhela yonke i-flavour eyodwa "ibhola", ne-panna (ukhilimu wobisi) ibala njenge-flavour.
Ikhekhe lase-Tiramisù lase-Italy elenziwa ngekofi, ama-mascarpone, nama-ladyfinger (kwesinye isikhathi ama-rum) nge-cocoa powder phezulu. Igama lisho "ukukhetha-up-up".
I-pizza yendabuko, eyindilinga itholakala ezindaweni zokudlela eziningi nezindawo zokudlela ezikhethekile ze-pizza (pizzerie). I "Ristorante-Pizzeria" ivame kakhulu e-Italy: empeleni indawo yokudlela esebenza ne-pizza eyenziwe ngezandla. Kuze kube yiminyaka embalwa edlule, bekuyivelakancane ukuthola indawo yokudlela esebenzisa i-pizza ngesikhathi sasemini, kulezi zinsuku azinjalo futhi i-pizza ngesikhathi sasemini ijwayelekile (kwesinye isikhathi kungcono ukubuza kumlindi uma bekwenza lokho ngaphambi koku-oda).
E-Italy ungathola cishe izinhlobo ze-800 zoshizi, kufaka phakathi iParmigiano Reggiano edumile, kanye nezinhlobo zama-sausage angaphezu kwe-400.
Uma ufuna ukukhahlela kwangempela, bese uzama ukuthola enye yezimakethi ezinkulu ezivulekile, ezihlala zivulekile ngeMigqibelo futhi imvamisa phakathi kwezinye izinsuku, ngaphandle kweSonto, futhi. Uzothola zonke izinhlobo ushizi nenyama ekubonisweni.
Emadolobheni amakhulu nasezindaweni zokuvakasha ungathola indawo enhle yokuhlala, ukusuka kumahhotela omkhiqizo asezingeni eliphansi kuya kumibhede ephethwe ngumndeni & izindawo zokuphumula nezindawo eziqashelwa egumbini, kodwa amahholo ambalwa kakhulu.
Izilinganiso zenkanyezi yehhotela zingathathwa kuphela njengophawu olubanzi lokuthi uzotholani imali yakho. Kunamahhotela amaningi amahle kakhulu we-2-star ongafuna ukubuyela kuwo minyaka yonke namahhotela amaningi ezinkanyezi we-5 ongeke uphinde ufune ukuphinda ungene kuwo. Isilinganiso senkanyezi, njengakuwo wonke amazwe, sisuselwa ekuhlolweni kwe-bureaucratic kwezikhungo ezinikeziwe futhi azihlobene nenduduzo. Imvamisa umehluko kuphela phakathi kwehhotela lenkanyezi i-3-star kanye ne-4-star ukuthi owokugcina unikeza konke ukudla ngenkathi owokuqala enikeza isidlo sasekuseni kuphela.
Izibhedlela zase-Italy zisesidlangalaleni futhi zinikeza ngokuphelele ukwelashwa okujwayelekile kwabahambi abasebenza e-EU, yize, njengakwenye indawo, ungalinda isikhathi eside ukusizakala. Usizo oluphuthumayo lunikezwa ngisho nakwabahambi okungezona ze-EU. Ngosizo olungeyona oluphuthumayo, izakhamizi ezingezona ze-EU ziyadingeka ukuthi zikhokhele imali ephaketheni, akukho mhlangano onama-inshurensi wezempilo wase-US (yize ezinye izinkampani zomshuwalense zingase ziphinde zibuyisele lezi zindleko). Noma kunjalo, isidingo se-visa ye-Schengen ukuthi unomshuwalense wokuhamba ovumayo ohlanganisa izindleko eziphuthumayo ezihlanganisa lonke uhambo lwakho.
Amanzi aseningizimu ye-Italy angaqhamuka enhlanzini futhi kwesinye isikhathi angaba nokunambitheka okungajwayelekile, ngenxa yesomiso esandisiwe. Uma ungabaza sebenzisa amanzi asebhodleleni. Kokunye amanzi ompompi ayaphuza ngokuphelele futhi agcinwe kahle. Noma okunye, kuthunyelwa isexwayiso esithi "NONOTABABILE".
Kukhona izindawo eziningi zomphakathi ezi-Wi-Fi ezise-Italy ezingenziwa mahhala ukusetshenziswa.
Ukuxhumana kwe-Intanethi (i-3G noma i-HSDPA) kuyatholakala kubo bonke abathwali abakhulu base-Italy.
Zombili izinqubo zefoni ezingaguquki nezamaselula ziyatholakala kulo lonke elase-Italy.
Hlola i-Italy enokuthile kuwo wonke umuntu.
Imidwebo Yamadwala eValcamonica
ISonto neDominican Convent likaSanta Maria delle Grazie nge “Isidlo Sokugcina” sikaLeonardo da Vinci
Isikhungo Somlando SaseRoma, Izakhiwo Zingcwele Zikulelo Dolobha Ezijabulele Amalungelo Wokuzibandakanya Kwamanye Amazwe neSan Paolo Fuori le Mura
Isikhungo Somlando saseFlorence
I-Piazza del Duomo, Pisa
IVenice neLagoon yayo
Isikhungo Somlando SeSan Gimignano
I-Sassi nePaki ye-Rupestrian Churches of Matera
Idolobha laseVicenza kanye nePalladian Villas yeVeneto
IFerrara, Idolobha Le-Renaissance, nePo Delta
Isikhungo Somlando weNaples
Isikhungo Somlando SaseSiena
UCastel del Monte
Izikhumbuzo ZamaKristu Okuqala zaseRavenna
Isikhungo Somlando Sedolobha LasePienza
The Trulli ka-Alberobello
I-18th-Century Royal Palace eCaserta enePaki, i-Aqueduct yaseVanvitelli, neSan Leucio Complex
Indawo Yokuvubukula kwe-Agrigento
Izindawo ze-Archaeological of Pompei, Herculaneum neTorre Annunziata
Ingadi yeBotanical (Orto Botanico), Padua
Cathedral, Torre Civica kanye noPiazza Grande, Modena
I-Portovenere, Cinque Terre, kanye ne-Islands (Palmaria, Tino kanye ne-Tinetto)
Izindawo zokuhlala zeRoyal House of Savoy
USu Nuraxi di Barumini
IVilla Romana del Casale
Indawo Yezokuvubukula kanye ne-Patriarchal Basilica ye-Aquileia
ICilento neVallo di Diano National Park enezindawo ezingama-Archeological of Paestum naseVelia, kanye neCertosa di Padula
Isikhungo Somlando Se-Urbino
I-villa Adriana (Tivoli)
I-Assisi, i-Basilica yaseSan Francesco kanye nezinye iziNdawo zeFrance
I-villa d'Este, eTivoli
Amadolobhana Akade Anendawo yeVal di Noto (iSouth-Eastern Sicily)
Sacri Monti yasePiedmont neLombardy
I-Etruscan Necropolises yeCerveteri neTarquinia
ISiracuse neRocky Necropolis yasePantalica
IGenoa: Le Strade Nuove nohlelo lwe I-Palazzi dei Rolli
Ama-Longobards e-Italy. Izindawo zamandla (568-774 AD)
I-Prehistoric Pile Dwellings ezizungeze i-Alps
IMedici Villas kanye neziNgadi eTuscany
Indawo yezwe yaseVineyard yasePiedmont: iLanghe-Roero neMonferrato
I-Arab-Norman Palermo kanye ne-Cathedral Churches yeCefalú neMonreale
Umsebenzi Wezokuvikela waseVenetian phakathi kwe-16th ne-17th Century: UStato da Terra - Intshonalanga UStato da Mar
I-Ivrea, idolobha lezimboni lekhulu le-20th